Ngabe ucabanga ngokutholwa kwebhizinisi? Cela ukwesekwa zomthetho
Uma unenkampani yakho, ngaso sonke isikhathi kungafika isikhathi lapho ufuna ukuyeka ukusebenza inkampani. Ngakolunye uhlangothi, kungenzeka futhi ukuthi ufuna ukuthenga inkampani ekhona. Kuzo zombili lezi zimo, amabhizinisi yokufuna linikeza ikhambi.
CELA noma uthengise IBHIZINISI?
Ukutholwa kwebhizinisi kuyinqubo eyinkimbinkimbi, engathatha izinyanga eziyisithupha kalula ukuba unyaka uqede. Ngakho-ke kubalulekile ukuqoka umeluleki wokutholwa, ongakucebisa futhi akweseke, kodwa futhi futhi futhi futhi futhi futhi futhi futhi futhi futhi futhi futhi futhi futhi futhi futhi futhi angathatha futhi imisebenzi ethile kuwe. Ochwepheshe at Law & More izosebenza nawe ukuthola amasu afanele okuthenga noma okuthengisa inkampani futhi ikunikeze ukwesekwa okusemthethweni.
Imephu yendlela yokutholwa kwebhizinisi
Yize ukutholwa kwebhizinisi ngalinye kuhlukile, kuya ngezimo zecala, kukhona umgwaqo womgwaqo olandelwa lapho ufuna ukuthenga noma ukuthengisa inkampani. Law & Moreabameli bazokusiza ngazo zonke izinyathelo zale mhlahlandlela wesinyathelo ngasinye.
Isinyathelo 1: Ukulungiselela ukutholwa
Ngaphambi kokuthi ukutholwa kwebhizinisi kwenzeke, kubalulekile ukuthi uzilungiselele kahle. Esigabeni sokulungiselela, izidingo zakho nezifiso zakho zenziwa. Lokhu kusebenza kubo bobabili iqembu elifuna ukuthengisa inkampani neqembu elifuna ukuthenga inkampani. Okokuqala, kubalulekile ukunquma ukuthi yimiphi imisebenzi yebhizinisi inkampani eyifaka kuyo, lapho imakethe inkampani isebenza khona nokuthi ufuna ukuthola noma ukukhokhela inkampani okungakanani. Kuphela uma lokhu sekucacile, ukutholwa kungenziwa kubengezwe. Ngemuva kwalokhu kunqunywe, ukwakheka okungokomthetho kwenkampani kanye nendima yomqondisi (yabaphathi) kanye nabanikazi bamasheya kumele kuphenywe. Kufanele futhi kunqunywe ukuthi kuyafiseleka yini ukuthi ukutholwa kwenzeke ngasikhathi sinye noma kancane kancane. Esigabeni sokulungiselela kubaluleke kakhulu ukuthi ungavumeli ukuholwa yimizwa, kodwa ukuthi uthathe isinqumo esicabangelwe kahle. Abameli ku- Law & More izokusiza ngalokhu.
Isinyathelo 2: ukuthola umthengi noma inkampani
Lapho izifiso zakho sezivele zichazwe kahle, isinyathelo esilandelayo ukuthola umthengi ofanele. Ngale njongo, iphrofayili yenkampani engaziwa ingadwetshwa, ngesisekelo lapho kukhethwe khona abathengi abafanele. Lapho umfundi sina litholwe, ke okokuqala kubalulekile ukuba asayine isivumelwano non-ukudalulwa. Kamuva, imininingwane efanele mayelana nenkampani ingenziwa itholakale kumthengi ongaba khona. Uma ufuna ukuthi zilawule inkampani, kubalulekile ukuthi uthola lonke ulwazi olufanele mayelana nenkampani.
Isinyathelo 3: Ingxoxo yokuhlola
Lapho umthengi ongaba ngumthengi noma inkampani engase ithathe izintambo itholakele futhi amaqembu abeshintshana ngolwazi, sekuyisikhathi sokuqala ingxoxo ehlolayo. Kuyisiko ukuthi hhayi kuphela ezingaba umthengi nomthengisi abakhona, kodwa nangenxa yanoma imaphi abeluleki, bezimali kanye ummeli olungisa izivumelwano.
Isinyathelo 4: izingxoxo
Ukuxoxisana kokuqala kokutholwa lapho umthengi noma umthengisi enentshisekelo. Kunconywe ukuthi izingxoxo zenziwe uchwepheshe wokutholwa. Law & MoreAbameli bangaxoxisana egameni lakho mayelana nezimo zokuthatha kanye nentengo. Lapho isivumelwano sesifinyelelwe phakathi kwalawa maqembu womabili, kubhalwa incwadi yezinhloso. Kule ncwadi yezinhloso, imigomo nemibandela yokutholwa kanye nezinhlelo zezimali zibekiwe.
Isinyathelo 5: Ukuqedwa kokutholwa kwebhizinisi
Ngaphambi kokuba kwenziwe isivumelwano sokugcina sokuthenga, kufanele kwenziwe uphenyo ngenkuthalo. Kulokhu kukhuthala okulingene kanye nokuphelela kwayo yonke imininingwane yenkampani kuyahlolwa. I ngokuzimisela efanele kubaluleke kakhulu. Uma inkuthalo efanele ingaholeli ku-irregularities, isivumelwano sokugcina sokuthenga singakhiwa. Emva ukudluliselwa kobunikazi ilotshwe ngu ummeli olungisa izivumelwano, amasheya zidluliselwe futhi yentengo sesikhokhelwe, yokufuna inkampani usuphothuliwe.
Isinyathelo 6: isingeniso
Ukuzibandakanya komthengisi kuvame ukungapheli ngokushesha lapho ibhizinisi lidluliswa. Kuvame kuvunyelwene ukuthi umthengisi angenise owalandela esikhundleni futhi amlungiselele lowo msebenzi. Isikhathi salesi sikhathi kokusebenza kufanele ziye zadingidwa kusengaphambili ngesikhathi sezingxoxo.
Kunezindlela eziningi zokuxhasa ukutholwa kwebhizinisi, enye nenye enezinzuzo zalo kanye nezinkinga zalo. Lokhu kungenzeka kwezimali nakho kungahlanganiswa. Ungase ucabangele kukho okulandelayo ngoba bokukhokhela yokufuna ibhizinisi.
Izimali ezikhona zomthengi
Kubalulekile ukuphenya kangakanani imali yakho siqu unga noma bafuna ukunikela ngokungcono ngaphambili kokuthi inkampani lutholwa. Ngokwenzekayo, kuvame ukuba nzima kakhulu ukuqeda ukutholwa kwebhizinisi ngaphandle kokufaka izimpahla zakho. Kodwa-ke, inani lomnikelo wakho lixhomeke esimweni sakho.
Imalimboleko evela kumthengisi
Ekusebenteni, a yokufuna ibhizinisi futhi ngokuvamile usekelwa umdayisi ukuhlinzeka ngezimali ngokwengxenye ngesimo loan ukuze owalandela. Lokhu kwaziwa nangokuthi imalimboleko yomthengisi. Ingxenye esekelwa ngumthengisi imvamisa ayiyona inkulu kuneengxenye umthengi ngokwakhe anikela ngayo. Ngaphezu kwalokho, ibizwa nangokuthi bavumelana njalo ukuthi inkokhelo zizokwenziwa in izitolimende. Kwenziwa isivumelwano semalimboleko lapho imalimboleko yomthengisi kuvunyelwana ngayo.
Kungenzeka futhi ngoba umthengi ukuthi zilawule amasheya eNkampani kusuka umdayisi ngezigaba. Kungakhethwa ilungiselelo lokuhola imali. Endabeni yelungiselelo lokuhola, ukukhokha kuya ngomthengi azuze umphumela othile. Nokho, leli lungiselelo ngoba kuthathwa kombuso ibhizinisi kuhilela izingozi ezinkulu uma kwenzeka izingxabano, njengoba umthengi uyakwazi ukuthonya Imiphumela yenkampani. Ithuba kumthengisi, ngakolunye uhlangothi, kungenzeka ukuthi okuningi kukhokhwa lapho kwenziwa inzuzo eningi. Kunoma ikuphi, kuwukuhlakanipha ukuba nokuqapha okuzimele kokuthengisa, ukuthenga kanye nokubuya ngaphansi kohlelo lokuhola.
(Ku) abatshalizimali abasemthethweni
Ukuxhaswa ngezimali kungathatha uhlobo lwemalimboleko kubatshalizimali abangahlelekile noma abangahlelekile. zimali nalolungakahleleki abangani, umndeni nabajwayelene nabo. Ukubolekwa okunjalo kuvamile ekutholeni ibhizinisi lomndeni. Kodwa-ke, kubaluleke kakhulu ukurekhoda kahle imali evela kubatshalizimali abangahlelekile ukuze kungabikho ukungaqondani noma izingxabano ezizovuka phakathi kwamalungu omndeni noma abangane.
Ngaphezu kwalokho, ukuxhaswa ngezimali ngabatshalizimali okuhlelekile kungenzeka. Lawa amaqembu anikeza nokulingana esebenzisa imali-mboleko. A kusimo ngoba umthengi ukuthi abatshalizimali esisemthethweni ngokuvamile futhi ube wabanikazimasheya enkampani, obanika ethile control. Ngakolunye uhlangothi, abatshalizimali abahlelekile bangafaka isandla kunethiwekhi enkulu nolwazi emakethe.
Indlela ngezimali eliya ngokuya ethandwa kuyinto crowdfunding. Ngamafuphi, ukubuyiselwa kwemali esixukwini kusho ukuthi ngomkhankaso ongena online, inani elikhulu labantu licelwa ukuthi litshale imali ekutholeni kwakho. Ububi bokubuyiselwa kwemali kwesixuku, noma kunjalo, kuyimfihlo; ukuze becabanga crowdfunding, udinga lizofika ukuthi inkampani ukudayiswa.
Law & More izokusiza ekuhloleni amathuba okuxhasa ukutholwa kwebhizinisi. Abameli bethu bangakweluleka ngamathuba afanele isimo sakho futhi akusize uhlele imali.